आज कुवेती दिनार र अस्ट्रेलियन डलरको मूल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज कुवेती दिनार र अस्ट्रेलियन डलरको मूल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?
काठमाडौँ । आज सोमबार कुवेती दिनार र अस्ट्रेलियन डलरको मूल्य उकालो लागेको छ भने धेरै देशको मूल्य यथावत रहेको छ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १३ रुपैयाँ ८९ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १४ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १० रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९६ पैसा छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ११ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्ड एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ २९ पैसा छ भने बिक्रिदर १४८ रुपैयाँ ७ पैसा छ।
त्यस्तै साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५० पैसा छ। त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा छ भने विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३७६ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३०१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३०३ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८० रुपैयाँ ६८ पैसा तथा बिक्रीदर ८१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ।
तालिकामा हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर